Ukudibanisa isenzi sesiTali '
Intsingiselo yesiTaliyane ithetha ukujonga okanye ukufuna. Yisenzo esisiqhelo sokuqala, isiThibthi saseNtaliyane kunye nesenzi esicatshulwayo, ngoko kuthatha into ngqo . Yisenzi esithakazelisayo kuba yenye yeqela elincinci apho isenzi siza phambi kokungapheliyo , njengokuba ku- cercare di (ukuzama).
Inqaku Ngokubhekiselele kwiiLwimi zokuQinisa kuqala
Iingxelo zento zonke eziqhelekileyo zesiTaliyane ziphela--a, okanye -eire kwaye zibhekiswa njengezenzi zokuqala, zesibini, okanye ezithathu zokulandelelana, ngokulandelanayo.
NgesiNgesi, i-infinitive ( infinito ) iqukethe isenzi. Iilwimi ezinezintlu ezingapheliyo ziphela-zibizwa ngokuba yi-first-conjugation, okanye -even, izenzi. Ixesha langoku lexesha eliqhelekileyo-isenzi isakhiwa ngokuyeka ukuphela okungapheliyo, -kunjalo, kwaye ukongeza ukuphela okufanelekileyo kwisiphumo esipheleleyo. Kukho ukuphela okuhlukile komntu ngamnye. Ekubeni i- carcare iphelile -kuko , isenzi isenzo sokuqala sokuqala.
Itheyibhile inika isigammeli ngasinye kwisigxina- (i), wena (wena), yena, lei (yena, yena), no (thina), voi (ubuninzi) kunye ne- loro (yabo). Amaxesha kunye nemizwelo yenziwa ngesi-Italian- presente (ekhona), p assato iprossimo (iphelele ngoku), imperfetto (engaphelelekanga), trapassato prossimo (idlulileyo), i- passato remoto (ekude kude), i- remoto i-remoto ( yangaphambili ), i- futuro semplice (i-future future) kunye ne- futuro anteriore (epheleleyo) ebonisa , elandelwa zizikhundla ezizimeleyo, ezingenasiphelo, ezithatha inxaxheba, kunye ne-gerund.
yena, lei, Lei cerca
voi i cercate
loro, uLoro i-cercano
yena, lei, Lei cercava
voi i cercavate
loro, uLoro i cercavano
io i cercai
yena, lei, Lei cercò
loro, uLoro cercarono
yena, lei, Lei cercherà
loro, uLoro cercheranno
kuphela hai cercato
yena, lei, Lei hac cercato
no abbiamo cercato
loro, uLoro hanno cercato
kuphela venvi cercato
yena, lei, Lei aveva cercato
no avevamo cercato
voi kuveza i cercato
loro, uLoro cervano
kuphela avesti cercato
yena, lei, Lei ebbe cercato
no avemmo cercato
loro, uLoro ebbero cercato
kuphela avrai cercato
yena, lei, Lei avrà cercato
no avremo cercato
loro, uLoro avranno cercato
yena, lei, Lei cerchi
loro, uLoro cerchino
yena, lei, Lei i-cercasse
loro, uLoro cercassero
kuphela abbia cercato
yena, lei, Lei abbia cercato
loro, uLoro abbiano cercato
kuphela avessi cercato
yena, lei, Lei kuveza i-cercato
no avessimo cercato
loro, uLoro avessero cercato
yena, lei, Lei cercherebbe
loro, uLoro cercherebbero
kuphela vresti cercato
yena, lei, Lei avrebbe cercato
no avremmo cercato
loro, uLoro vrebbero cercato
Iilwimi zesiThuthi zeNtsingiselo zoLwimi zesiXhosa rhoqo
Iimpawu zeSpanish ezibhekisela kwizilwanyana
Ukwenza Ixesha Elizayo leSpeyin
Ukwahlukana Phakathi kweSamstag, uSonnabend kunye noSonagag
Ukudala izibhengezo ngokufaka '-mente' kwii-Adjectives
Iincwadi eziZimileyo zokuFunda ngokubeka
Imfazwe ka-Aleksandro Omkhulu: Ukuvinjelwa kweTire
Isikhokelo soKhuselo lweSuku sikaValentine
I-Moten ye-10 ephezulu kunazo zonke Iindleko zexesha lonke
Ingozi Ezingqongileyo Zokuqhawula?
Oko Akuyi kuzisa kwiSikolo soBhodi
Isikhokelo esifutshane kwi-Army Republican Army